Barcelona Oo Isha Ku Heysa Weeraryahan Arsenal U Safta – Garsoore Sports
Barcelona Oo Isha…
Kooxda Barcelona ayaa xiiseyneysa inay Alexandre Lacazette kala soo wareegto Arsenal haddii aysan awoodin inay la soo wareegaan weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero, sida laga soo xigtay El Gol Digital.
Sidey wararku tebinayaan, Barcelona ayaa dooneysa inay Aguero ku keento Camp Nou si bilaash ah xagaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii kooxda Ispaanishka ay awoodi weeyso inay heshiis la gaarto weeraryahanka heerka caalami ee dalka Argentina oo ku saabsan mushaarkiisa, waxay eegi doonaan weeraryahanka Arsenal Alexandre Lacazette oo ah beddelka suurtogalka ah, sida lagu sheegay warbixinta.
Barcelona waa mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka hadana waa koox muuqata awoodeeda iyo sumcadeeda inkasta oo ayna waayadan ku fiicnayn Champions League-ga amaba aynan ku guulaysaneynin horyaalka La Liga ololahan.
Lacazette waa ciyaaryahan muhiim u ah Gunners, xaqiiqda dhabta ah ayaa ah inuusan isagu aheyn ninka ugu weyn ee safka hore uga ciyaara Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang oo ah kabtanka kooxda ayaa kaga horreeya dookha doorasho.
29 jirkaan heerka caalami ee reer France ayaa laga yaabaa inuu helo fursad uu ugu dhaqaaqo Barcelona haddii lagu qanciyo inuu si joogta ah u ciyaaro.
Sida laga soo xigtay WhoScored, weeraryahankan ayaa dhaliyay 10 gool isla markaana caawiye ka noqday laba kale 18 kulan oo Premier League ah oo uu ku bilowday waxana uu dhaliyay hal gool shan kulan oo Europe League-ga ah oo uu u ciyaaray Arsenal ilaa haatan xilli ciyaareedkan.